Geofumadas: Safarka dheer ee sawirada 8 - Geofumadas
Geofumadas: Safarka dheer ee sawirada 8
Abriil, 2011 safarka
Waxay igu soo dhaweeyeen maalmaha ugu dambeeya safar kiiloomitir iyada oo loo marayo dhulal kala daata. Mawduucaan yar oo aan ku soo galo meeshan, isku dayaya in aan daryeeli karo sirta ah ee shaqadayda shaqadeyda iyo raaxaysiga ah in la wadaago maadooyinka teknoolajiyada iyada oo lala kaashado beelaha kale.
Waxaan awooday inaan eego awoodda isku-xirnaanta Ipad ee safarkan, raadinta GPS-ka ee aan waligeed lumin waayo sababtoo ah maaha mid ku xiran signalka internetka, xitaa saxnimada waa mid sax ah inkastoo ay ku socoto gaariga xawaare joogta ah. Si kooban ayaan uga tagaa sawirrada qaarkood oo iyaga u hadlaya.
Baabuurka ayaa si fudud u habboon buundada qashinka ah. Waa lagama maarmaan in xitaa isku laabo muraayadaha si aan u dhicin kabaha ... waa wax xiiso leh, gaar ahaan markii kuraasta loo jarayo sida ay u bixinayaan.
Calaamad xumo ah oo ku saabsan gawaarida iyo volada waxay noqon laheyd mid cajiib ah oo ku saabsan xawaare ka badan mitirka 400. Dabcan, aragtida aroortu waa mid cajiib leh, asal ahaan magaaladii aan ku soconay.
Halkaan ayaa ahaa markii wiilkaygu iigu yeedhay inaan i siiyo wararkii murugada ahaa ee ku dhashey Phillip xaqiiqdii baxsaday iyo in gabadhaydu ay qandho haysay.
Cunnadu waa raaxaysi, ma jiraan wax la cuno si ay u kariyaan laakiin dhadhan fiican. Libras ka badan, kharashka yar, iyo ku dhawaad ​​qofna ma tirin at this point.
Ujeedadu waxay isla meesha sacalenguas ah qaab backlit. Cadejo soo baxa gelinka dambe si aad u hesho digaagga jaahiliinta, jacaylka wasakh picaflor ka dhagax webi oo ay leeyihiin roadrunner waa qof dumar ah oo ku gubi ninkeeda ciddiyihii orsada ayaa noqday sida Colosuca.
Heerkulka: 38 degrees centigrade
Lakabka sare ee wadada wadada: Saacadaha 6.5 ee aan xayirneyn
Waddada Waddada: Mitirka 2.63 ee wadada labanlaab
Dababka: hal mid ah 100 kasta oo safar ah.
Xaaladaha aan la iska dhaafi karin: Hargab wanaagsan, kuleyl iyo fayrasyo ​​adag.
Waxaan mar hore doonayaa in aan arko geedi socodka cadawga ee miyiga ah ee bilawga bisha soo socota.
Naqshad dhismeed kaniisad ah, oo dib loo dhisay qarnigii toddobaad ee tuulada oo wakhtigaasi uu lahaa guryo 10 ah.
Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn ee ku yaal bartamaha America sababtoo ah naqshadeynta dhismayaasha gudaha iyo sawirrada, ceebta ah oo ku saabsan inay ku dhacdo jiirarka ku nool. Saaxiibkaygu wuxuu sameeyey panorama cajiib ah.
Tani waa xusuusta, maalinti oo aan doortay 8 ee farsamooyinka aan wali leeyahay. Halkaas waxay ku arkaan R! M! p! m! iyo P!
Post Previous«Previous Tool for barbar codes ama fayl
Post Next Bentley Map V8i Isbedelada 2011Next »
2 Jawaab "Geofumadas: Safar dheer oo ku yaala 8 sawirada"
Sawirrada, La Unión, San Rafael, Las Flores, La Iguala iyo Talgua. Dhamaan dhulalka Cacique L!
dharka isagu wuxuu leeyahay:
Adventures xiiso leh!
Ma garan kartaa magaca tuulooyinka?